Imibuzo evame ukubuzwa - iVecano Electronics Co., Ltd.
Lapho i-jammer yesiginali ephathekayo isebenza, amanye amafoni aphathekayo akhombisa isignali. Kungani kunjalo?
Lapho ifoni evikela ifoni ephathekayo isebenza, kunamathuba amabili esignali ekhonjiswe efonini ephathekayo:
Okokuqala ukuthi iselula ingaxhunywa. Uma ifoni ephathekayo ingaxhunywa, kusho ukuthi indawo evikelayo ayikafinyeleli ekuvikeleni okusebenzayo futhi kunokuvuza. Futhi kusho ukuthi imikhiqizo yakho yamanje yokuvikela ifoni ayikwazi ukuhlangabezana nezidingo zokuvikela isiza sakho;
Okunye ukuthi ifoni ephathekayo ayinakuxhunywa. Uma kunjalo, kusho ukuthi umakhalekhukhwini usesimweni esibucayi, futhi lokhu kwenzeka kumaselula anokulwa nokuphazamiseka okuqinile nokuzwela okuphezulu.
Ngisengakwazi yini ukuntweza i-Intanethi ngemuva kokuthi ifoni ephathekayo yesikole ivinjiwe?
Kulezi zinsuku, izikole eziningi sezifake amadivayisi okuvikela omakhalekhukhwini. Ngemuva kokuthi ukuvikelwa kuvuliwe, ngabe iqembu labafundi lisengangena ku-inthanethi?
Ngokuvamile, kunezindlela ezintathu zokusebenzisa i-Intanethi ngomakhalekhukhwini.
Indlela yokuqala ukusebenzisa i-Inthanethi ngokusebenzisa amasiginali opharetha weselula. Lapho nje ifoni evikelayo ivuliwe, ifoni ephathekayo ayikwazi ukwamukela isignali ye-opharetha, okuholela ekungakwazini ukushaya izingcingo noma ukuthumela imiyalezo, futhi ngokwemvelo ayikwazi ukungena kwi-Intanethi. Ukuvikelwa kuyasebenza.
Indlela yesibili ukuxhuma ifoni ephathekayo ku-WIFI ukuze ungene kwi-Intanethi. Uma unenhlanhla ngokwanele, i-jammer ayiwenzi umsebenzi wokuvikela isiteshi se-2.4gwifi, khona-ke siyakuhalalisela, yize ungeke ushaye futhi uthumele imiyalezo, kepha ngine-network emhlabeni, i-QQ ne-WeChat izwi nevidiyo kusengasebenza kwenziwe, ukubuka ama-movie nokudlala imidlalo akunankinga. Kodwa-ke, uma ngabe idivayisi yokuvikela isekela umsebenzi wokuvikela i-wifi, i-Intanethi ayikwazi ukutholakala kuleli cala, futhi ukuvikelwa kuyasebenza.
Indlela yesithathu ukudlulisa imbobo ye-LAN yenethiwekhi enezintambo iye ngqo kuselula. Le ndlela ifana nokungena emhlabeni womuntu, njengekhompyutha exhunywe ngqo kwikhebula lenethiwekhi, noma ngabe isihlangu siyavulwa noma cha, akukho ukuphazamiseka, futhi ijubane lenethiwekhi libushelelezi. Kepha uma kungekho interface ye-LAN kunethiwekhi yangaphandle, izobizwa hhayi nsuku zonke, futhi ngeke isebenze.
Kunoma ikuphi, umsebenzi omkhulu njengomfundi ukufunda, ukusebenza kanzima futhi ufunde kanzima, ikusasa lakho yikusasa le-motherland.
Kungani kungekho jammer yesiginali endizeni?
Yize i-jammer yesiginali ibizwa ngokuthi "i-jammer" eyisiginali, empeleni iyisiginali "ujammer" kanye ne-jammer enamandla amakhulu.
Isizathu esenza ukuthi omakhalekhukhwini bangasetshenziswa ezindizeni ukuvimbela amasignali omakhalekhukhwini ekuphazamiseni ukuxhumana kwezindiza. Ukufaka i- "jammer" kusho ukufaka umthombo omkhulu wokuphazamiseka. Ngakho-ke, ngeke kube khona okokusebenza okunjalo endizeni!